Ndụ, Lovehụnanya, Ọchị | Martech Zone
Anọ m na-eme ọtụtụ echiche n'oge na-adịbeghị anya ma soro nwa m na-ede uri na ndụ, ịzụ ụmụ, ọrụ, mmekọrịta, wdg. Ndụ na-abịakwute gị na nkebi ma a manyere gị ime mkpebi ndị ị na-achọghị.
Nkeji nke 1: Alụmdi na nwunye
Ihe dị ka afọ 8 gara aga ọ bụ alụkwaghịm m. Ekwesịrị m ịchọpụta ma m̀ ga-arụli nna m ma ọ bụ na ọ bụghị. Ahọrọ m nke abụọ n'ihi na enweghị m ike ibi na-enweghị ụmụ m.
N’oge a gbara alụkwaghịm, m kwesịrị ịchọpụta ụdị nwoke m ga-abụ. M ga - abụ di di iwe na-adọkpụrụ nna ya na ụlọ ikpe, na - ekwujọ ihe ọ na - emebu n’ebe ụmụ ya nọ, ka m ga - enweta ngọzi inwe ụmụ m ma were ụzọ dị elu. Ekwenyere m na m weere okporo ụzọ ahụ dị elu. M ka na-agwa nwunye m okwu oge ụfọdụ na-ekpekwa ekpere maka ezinụlọ ya n'oge ụfọdụ m maara na ha na-agba mgba. Nke bụ eziokwu bụ, ọ na-ewe obere ike n'ụzọ dị otu a ma ụmụaka m aka ya mma.
Nkeji 2: Oru
N'ebe m na-arụ ọrụ, m na-emekwa mkpebi. Ahapụrụ m ihe karịrị nnukwu ọrụ ole na ole gara aga n’ime afọ iri gara aga. Ahapụrụ m otu n’ihi na amaara m na agaghị m abụ ihe ọga m chọrọ ka m bụrụ. Ahapụrụ m nke ọzọ n’oge na-adịbeghị anya n’ihi na anaghị m emezu n’onwe m. Anọ m na kediegwu oru ugbu a nke ahụ na-ama m aka kwa ụbọchị… mana enwere m ezi uche na m nwere ike ghara ịnọ ebe a afọ iri site ugbu a, ma.
Ọ bụghị na m nwere obi abụọ, ọ bụ naanị na m nwere ntụsara ahụ na 'niche' na ahịa na teknụzụ. Ọ na-amasị m ịmegharị ngwa ngwa na ọrụ. Mgbe ihe jiri nwayọọ na ụlọ ọrụ chọrọ nkà ndị ahụ na-enweghị mmasị m, achọpụtara m na oge eruola ịkwaga (n'ime ma ọ bụ n'èzí). Achọpụtala m na ọ bụrụ na m na-arụ ọrụ m, m na-enwe ezigbo obi ụtọ karịa mgbe m na-echegbu onwe m banyere adịghị ike m.
Nkeji 3: Ezinaụlọ
Ana m abịaru 40 nso ugbu a ma abịaruola ndụ m ebe m ga-eme mkpebi na mmekọrịta mụ na ya. N'oge gara aga, etinyewo m ume dị ukwuu na inwe ezinụlọ 'na-etu m ọnụ'. N'ọtụtụ ụzọ, echiche ha dị mkpa karịa nke m. Ka oge na-aga, achọpụtara m na ha tụrụ ihe ịga nke ọma dị iche na nke m tụtụworo.
Ihe na-egosi ihe na-eme ka m nwee ọ successụ bụ site na ọ happinessụ ụmụ m nwere, ezigbo ọyị na ọnụọgụ ndị enyi m nwere, ndị mụ na ha na-akpakọrịta, nsọpụrụ m na-enweta n’ebe ọrụ, na ngwaahịa na ọrụ m na-eweta kwa ụbọchị. Nwere ike ịchọpụta na aha, aha ma ọ bụ akụ na-anọghị ebe ahụ. Ha abụghị, ha agaghịkwa adị.
N'ihi ya, mkpebi m bụ ịhapụ ndị na-achọ ịdọkpụrụ m kama ibuli m. Ana m asọpụrụ, hụrụ ha n'anya ma na-ekpekwa ekpere maka ha, mana agaghị m etinye ike na-achọ ime ka ha nwee obi ụtọ ọzọ. Ọ bụrụ na emeghị m nke ọma na echiche ha, ha nwere ike idebe echiche ha. Abụ m kpatara m obi ụtọ ha kwesịrị ịnara ibu ọrụ maka nke ha.
Dika nna, enwerem obi uto banyere ndi umuaka m no ugbu a, ana m ahukwa ha n’anya n’enweghi nsogbu. Mkparịta ụka anyị kwa ụbọchị na-ekwu maka ihe ha mere nke ọma, ọ bụghị na ọdịda ha. Nke ahụ kwuru, M na-esiri ụmụ m ike ma ọ bụrụ na ha anaghị ebi ndụ dị ka ikike ha nwere, n'agbanyeghị.
Nwa m nwanyị akara ule dabara nke ọma n'izu gara aga. Echere m na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ya bụ na mmekọrịta ọhaneze abụrụla ihe dị mkpa karịa ọrụ ụlọ akwụkwọ ya. O wutere ya mgbe o ruru akara ugodi. Ọ na-ebe ákwá ụbọchị niile n'ihi na ọ bụ nwata akwụkwọ A / B. Ọ bụghị otú o si wute m na nke ahụ pụtara, ọ bụ otu o wutere.
Katie nwere mmasị na-eduga na klas ma kpọọ asị ịnọ na ala. Anyị mere ụfọdụ mgbanwe - enweghị ndị enyi bịara ileta anyị kwa izu ma ọ bụ mee etemeete. Mee-elu bụ ihe siri ike… Echere m na ọ ga-agba oghere n'ime m na nku anya ya. Otú ọ dị, n'ime izu ahụ, akara ule ya amalitela. Ọ naghị ere ọkụ n’oghere m ọzọ, ọbụnakwa chịrị m ọchị n’ụbọchị ọzọ n’ime ụgbọ ala.
Ọ bụ ọrụ siri ike dị elu, mana m na-eme ike m niile iji mesie ihe dị mma, ọ bụghị na-adịghị mma. Ana m agbalị iduzi ha n’oké osimiri mara mma, na-echetaghị ha mgbe nile banyere oké ifufe dị n’azụ ha.
Dika umuaka m si enwe obi iru ala na ndi ha bu, obi na ato m uto onye ha bu. Ha na-eju m anya kwa ụbọchị. Enwere m ụmụaka na-enweghị atụ… mana enweghị m nghọtahie ọ bụla gbasara onye 'Echere m na ha kwesịrị ịbụ' ma ọ bụ 'otu ha kwesiri isi mee'. Nke ahụ bụ ka ha chọpụta. Ọ bụrụ na ha na-enwe obi ụtọ na onwe ha, ha direction na ndụ, na m… mgbe ahụ, m obi ụtọ n'ihi na ha. Bestzọ kacha mma m ga-esi akụziri ha ihe bụ igosi ha otú m si akpa àgwà. Buddha kwuru, sị, "Onye ọ bụla nke hụrụ m na-ahụ nkuzi m." Enweghị m ike ikwenye karịa.
Nkeji 4: Ọ Joụ
Echetara m a comment obere oge laghachi na ezigbo 'ezigbo enyi', William onye jụrụ, "Gini mere Ndị Kraịst ji aghapụtakarị onwe ha?". Agaghị m aza ajụjụ ahụ n'ihi na m ga-eche ọtụtụ ihe banyere ya. O kwuru eziokwu. Ọtụtụ Ndị Kraịst na-ekwuwapụta onye ha bụ site 'n'omume' karịa gị. William nwere ikike ọ bụla ịma aka ndị a. Ọ bụrụ na ị tinye onwe gị na ntọala, dị njikere ịza ihe kpatara ị nọ ebe ahụ!
Achọrọ m ka ndị mmadụ mata na m bụ Onye Kraịst - ọ bụghị maka na ọ bụ onye m bụ kama ọ bụ onye m nwere olile anya ịbụ otu ụbọchị. Achọrọ m enyemaka na ndụ m. Achọrọ m ịbụ onye obiọma. Achọrọ m ka ndị enyi m mata m dị ka onye nwere ọmịiko, mụmụrụ ọnụ ọchị, ma ọ bụ kpalite ha ime ihe dị iche na ndụ ha. Ka m na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na onye isi ike ma ọ bụ ahụhụ m na-edozi na gburugburu, ọ dịịrị m mfe ichefu nnukwu foto ma kwuo okwu ole na ole. Ọ dịịrị m mfe iwesa ndị ụlọ ọrụ na-enye m nsogbu.
Echiche m (pere mpe) banyere nkuzi m kwenyere na-agwa m na ndị ahụ na ụlọ ọrụ ọzọ ahụ nwere ike na-arụsi ọrụ ike, nwee nsogbu ndị ha na-achọ imeri, ma ha kwesịrị ndidi na nkwanye ùgwù m. Ọ bụrụ na m agwa gị na m bụ Onye Kraịst, ọ ga-emepe emepe m maka nkatọ mgbe m bụ onye ihu abụọ. Abụm onye ihu abụọ (oge ụfọdụ) yabụ nweere onwe m ime ka m mara na abụghị m ezigbo Onye Kraịst, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweghị otu nkwenye m.
Ọ bụrụ na m nwere ike ịkọwa ọkwa nke anọ, m ga-ahapụ ụwa a onye nwere ezigbo obi ụtọ. Ama m na aga m enweta ezigbo ọ joyụ… Ahụla m ụdị ọ joyụ ahụ na ndị ọzọ ma achọrọ m ya n'onwe m. My okwukwe na-agwa m na nke a bụ ihe Chineke chọrọ ka m nwere. Amaara m na ọ bụ ihe dịịrị maka ịnara ya, mana ọ na-esiri ike ịhapụ omume ọjọọ ma gbanwee obi anyị. Aga m anọgide na-arụ ọrụ na ya.
Echere m na nke a abụghị oke gushy maka post gị. Achọrọ m ikwu ntakịrị ihe gbasara nsogbu ezinụlọ m na idepụta ederede na-enyere m aka nke ukwuu. Ikekwe ọ ga-enyere gị aka!
Tags: mbọnihe ngosimgbasa ozislideshareuto slidesharesm atumatunwa nnụnnụ mmiriwp_footerwp_isi
Ọkt 20, 2007 na 3:45 PM
OZI post! Ọ na-amasịkwa m ịmata na ọ bụghị naanị m bụ nne na nna na-ata ahụhụ site n’iwepụ ihe ntecha. Nwa m nwanyị na eyeliner bụ ezigbo enyi ya. Ọ bụ ihe ịtụnanya na etu o si “enweta ya” ọsịsọ mgbe anaghị anabata ya. 🙂
Ọkt 20, 2007 na 4:04 PM
Site na ezumike etemeete, ana m enwe olileanya na Katie ga-ahụ otu o si maa mma ma jiri obere oge mechaa.
Ọkt 20, 2007 na 10:54 PM
Ekwenyere m. Agbanyeghi na nwa m nwanyi ihe nlere n’ile abiala nke oma n’abali a ka m na akwado maka emume Heartland Film Festival Crystal Heart Awards. O kwupụtara na m 'emeghị ya nke ọma' wee gaa n'ihu jupụta n'anya m. Ee, abughi m onye na-achọ etemeete, ọkachasị b / c achọghị m itinye oge na ya. Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị tinyere ya trowel kwesịrị ịkwụsị b / c ha mara ezigbo mma n'okpuru. Bụ ezigbo nna n’ịgbalị ịkụziri nwa gị nwanyị ihe ịma mma bụ n’ezie.
Ọkt 21, 2007 na 1:53 AM
Chei, lee post Doug! Àgwà gị masịrị m nke ukwuu.
Know mara, enwere nnukwu ndozi n'etiti Iso Christianityzọ Kraịst na Islam ma a bịa n'ihe gbasara ezinụlọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Otutu ihe ikwuru na ikwere na-egosi otutu nkuzi ndi Islam. Ọ bụ ihe ọchị na mgbe ụfọdụ ndị na-abụghị Mulsims dị ka gị na-arụ ọrụ ka mma nke igosipụta ụkpụrụ Alakụba karịa ụfọdụ ndị Alakụba na-ekwu okwu.
Ya mere, maka nke a, ana m ekele gị! Nọgide na-enwe àgwà ziri ezi. A bu ezigbo onye na - ede blọgụ, ma ijide n’aka dịka oku ala mmụọ dị ka hel nke nna.
Ọkt 21, 2007 na 8:18 AM
James Chartrand - ụlọ ọrụ JCM
Ọkt 21, 2007 na 5:25 AM
Ndoo ikwu ya, mana post a ka m na-arụ ụka ma m ga-ewepu aha ma ọ bụ na ọ bụghị - maka ihe ole na ole:
1. Nke a bụ blog banyere ahịa (ma ọ bụ nke ahụ bụ echiche m). Ọ bụ ezie na ọ dị mma ịgbakwunye mmadụ na ịma mma banyere nkwenkwe gị, ogologo oge gbasara okpukpe gbanwere m.
Ekwela ka m mehie; okpukpe dị mma ma ana m akwanyere nkwenkwe gị ùgwù. Mana okpukperechi bụ nke onwe, echeghị m na ọ nwere ebe ọ bụla na azụmaahịa azụmahịa. Ọ bụrụ na m chọrọ ịgụ gbasara okpukperechi, m ga-edebanye aha na blọọgụ nwere echiche okpukpe.
2. Writde ihe banyere nwatakịrị nwanyị nọ n'afọ iri na ụma na-ebe ákwá ụbọchị niile maka akara ule na-adịghị mma na-eme ka m nwee ọrịa afọ m. Nwatakịrị ahụ adịghị emechu ihu, ọ ga-abụ na ụjọ na-atụ ya maka mmeghachi omume gị!
3. Ide ihe banyere inye nwatakiri ntaramahụhụ maka akara ọjọọ mgbe ọ kwara ákwá ụbọchị niile (nke na-abụghị ezigbo mmeghachi omume nwata nwanyị) na-eme ka m nwee ọrịa. Na-ata mmadụ ahụhụ mgbe ha mere ihe ọjọọ, echekwala ya. Mana mgbe mmadụ mere nhọrọ na-adịghị mma, chọpụta ya, mụta ihe na ya ma dị njikere ime nke ọma n'oge ọzọ, hapụ ya na nke ahụ. Hapụ nwa agbọghọ ahụ obi ike. Kwe ka o mee nke ọma n'ihi na ọ chọrọ - ọ bụghị n'ihi na ụjọ na-atụ ya maka ntaramahụhụ.
M na-asọpụrụ na ị nwere ike ma ọ bụ na ị gaghị ekwenye na m. Echere m na ị ga-achọ ịma ihe kpatara nke a blog post Agbaghara akara kpamkpam na m.
Ọkt 21, 2007 na 8:30 AM
Ọkt 21, 2007 na 9:28 AM
Mara mma, Doug. Enwere m blog azụmahịa yana otu akpọrọ "Personal Ramblings" maka otu ụdị ihe ahụ. Ntọala saịtị ahụ na mkpuchi ya enyerela m n'echiche na ọ bụ blọọgụ azụmahịa siri ike.
Ahụrụ m onwe m n'ọnọdụ dị egwu na ịntanetị. Abụ m onye Canada, ọdịbendị anyị na-agbakarị jụụ banyere okpukpe karịa ndị agbata obi anyị America, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-emebiga ihe ókè (n'echiche m, anaghị m asị na ị bụ onye isi ike). Ana m akwanyere nkwenkwe ndị mmadụ ùgwù ma nwee nke m, enweghị m mmasị na iri nri.
O di nwute, na extremism emewo ka m kpachara anya nke ibu akwukwo-thump, na m radar maka abata thump yiri ka a ga-etinye na elu uche. Yabụ ọ bụrụ na agaghị m akụtu ebe a, m ga-arapara n'ahụ. Ezigbo azụmahịa?
Banyere ụmụ nwanyị… Ọ dị mma ịnụ na ị ghọtara afọ iri na ụma chọrọ nnwere onwe ahụ, na ekele maka ikpochapụ nke ahụ. Ekwenyesiri m ike na ihe nkedo ahụ ga-eme, ka nsogbu ndị nne na nna na-etinye onwe ha maka. Anaghị m “enweta” ndị nne na nna na-ejikarị aka ike azụ ụmụ ha. Ọ bụghị azịza ya.
Na… Enwere m afọ 14 na nwatakịrị n'onwe m, n'ihi ya enwere m ike ịghọta nsogbu nke ịzụ ụmụ na ike nke etemeete.
Ọkt 21, 2007 na 10:24 AM
M na-egwu egwuregwu na ụmụ akwụkwọ sekọndrị m na America enweghị ike ịjụ maka toque ka mma karịa Canada!
Daalụ maka ezi uche ị zara… Ọ dịghị mgbe m were ya n'ụzọ ahụ ma ọlị.
Ọkt 21, 2007 na 10:59 AM
Ọ dị ka isi akụkọ ihe mere eme gị. Mana post gị nwere ntakịrị ọusụ. Na-atụ anya na ị ga-enweta ọ joyụ kwa ụbọchị!
Ọkt 21, 2007 na 9:20 PM
Ọkt 21, 2007 na 4:55 PM
M ga-ezitere gị toques maka Xmas 🙂
Ọkt 21, 2007 na 9:21 PM